Version 0.9.6.0 – Fọdụrụ n'ezinụlọ igafe, wepụtara na nso ụbọchị
December 21, 2014 site na rịọ Ahapụ a Comment
Nke a na-agbakwụnye version ọhụrụ n'asụsụ iri Google ịsụgharị ka ndondo kwukwara. Ntọhapụ lekwasịrị anya na-alụ ọgụ ịdọ aka ná ntị na chịnchị na ejirila nwayọọ nwayọọ malite n'ime Transposh na afọ ikpeazụ.
Otu nwere ike ịjụ onwe ya, ma ọ bụrụ na software agbanwebeghị, otú abịa chinchi na ejirila nwayọọ nwayọọ malite? Azịza nke dị mfe, na software adịghị adị na a agụụ, ihe ịgbanwe oge niile, ọhụrụ nsụgharị nke PHP kwukwara ike ịdọ aka ná ntị nke nsogbu ụfọdụ ndị ọrụ, e nwere ndị ọhụrụ releases maka wordpress na ndị ọzọ na software akụrụngwa, nakwa dị ka gbanwere pụrụ ime ihe nile Google ịsụgharị engine. Mgbanwe ndị kere ọnọdụ ndị na-ugbu a koodu bụghị ike aka, ma anyị na-achọ ọhụrụ a version ga-a bit ọzọ ruru eru nke na-eme.
Ndị ọzọ ọhụrụ stof agụnye Yoast SEO sitemaps mwekota (I kwesịrị ịmachi ya, ntụziaka na anyị koodu).
A obere atụmatụ iji wepụ na-abaghị uru na akpaaka nsụgharị (ebe Nsụgharị ndị hà na mbụ ndido urụk, nke na-eme mgbe ụfọdụ saịtị ọkọdọ egbochi site Google)
ọzọ stof, na readme.txt faịlụ bụ enyi gị.